Izay voarainao avy any an-danitra | Fondation des Choisis de Jésus
Izay voarainao avy any an-danitra
2A_29: Ry Bitikako, izay voarainao avy any an-danitra dia efa madio. Ny fankasitrahanao an’izany dia manampy amin’ny fanadiovana anao ; ary raha zarainao, dia mandray anjara ianao amin’ny fanadiovana ny hafa sy ny tany rehetra. Izay voarainao avy amin’ireo olona hafa, na tsara izany na ratsy, dia tsy mampisy voka-dratsy ho anao, raha toa ka tsy tehirizinao ho anao ; fa kosa raha atolotrao avy hatrany an’Andriamanitra, dia ho voadio tanteraka.